Home Wararka Wasiirka Maaliyadda Qatar oo xabsiga loo taxaabay laguna eedeeyay Musuqmaasuq
[Deg Deg] Wasiirka Maaliyadda Qatar oo xabsiga loo taxaabay laguna eedeeyay Musuqmaasuq
Wasiirka maaliyadda Qatar Ali Sherif al-Emadi ayaa ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo loo heysto eedeymo la xiriira lunsi hanti qaran, ku takrifal awoodeed iyo dambiyo la xiriira musuqmaasuq, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka dowladda ee QNA ayaa lagu sheegay maanta oo khamiis ah.
Dowladda Qatar ayaa sidoo kale sheegtay in uu socdo Baaritaan la xiriira danbiyada lagu soo oogay Wasiirkii hore ee Maaliyadda Qatar.
Emadi wuxuu ahaa wasiirka maaliyada dowlada Qatar tan iyo sanadkii 2013 wuxuuna xubin ka ahaa gudiga sanduuqa hantida Qatar oo maamusha adduun dhan $300 billion, Hay’ada Maalgashiga Qatar.
Sidoo kale wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga Bangiyada Qatar (Qatar National Bank) oo ah midda ugu weyn ee bixisa deymaha wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika.
“Waxyaabaha la helay iyo baaritaanka waxay la xiriiraan booskiisa dowladeed ee wasiirka maaliyadda ee ma ahan doorka xubinta guddiga ee hay’adaha kale,” ilo xog ogaal u ah baaritaanka ayaa yiri, iyadoo diiday inay bixiso faahfaahin dheeri ah.